INDLU YEGADI/RYLSTONE.......ilizwe liyaphupha
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMargaret
IGARDEN HOUSE ibilikhaya losapho iminyaka emininzi kwaye unokuziva ulonwabo ngokukhawuleza nje xa ungena. Ineendawo ezininzi zokuhlala kunye nokuphumla, ngaphakathi nangaphandle, kunye negadi ekhumbuza loo holide yase-Italiya. ..ungaziva ungafuni ukuhamba!
Ukuba uyasiva isidingo sokungena edolophini, uhambo lulula, singaphantsi kwe-1km kwisitalato esikhulu saseRylstone.
Baleka esixekweni uze uhlale neqabane lakho, abahlobo okanye usapho kwaye...njengoko besitsho phinda uhlaziye iingqondo zakho
IGARDEN HOUSE ikumda wedolophu yaseRylstone kwaye kude nendlela enkulu kunye nayo nayiphi na ingxolo yendlela. Kwaye ngelixa kuvakala ngathi uselizweni, ukuhambo olufutshane nje okanye uhambe uye kwisitrato esikhulu saseRylstone.
Inegumbi lelanga elikhulu ngokwenene elimiselwe njengeofisi yekhaya kuye nabani na ofuna ukuhamba enze umsebenzi omncinci ngexesha elinye .... nangona unokufumana umbono ongaphandle wokuphazamisa kancinci.
Zininzi iindawo zokuhlala kwaye uphumle, zineendawo ezi-3 zokuhlala ezahlukeneyo ngaphakathi, kunye neendawo ezininzi egadini ophangiweyo ukuba uzikhethele!
Yitya ngaphakathi kwitafile yesimbo selizwe okanye kwitafile yentsimbi eyenziwe kakuhle ngaphandle kweyadi. Ikhitshi lelizwe lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye lisanda kulungiswa njengempahla yethu entle.
Le ndlu inemvakalelo epholileyo neyamkelekileyo kwaye ihonjiswe kwisitayile selizwe sakudala esigcwele amagumbi okuphumla elinen kunye nobugcisa obuthile basekhaya kunye nezinto ezahlukeneyo ezifunyenwe kwiivenkile zasekhaya. Ukuze ukhululeke ngokupheleleyo, ikhuphe i-aircon kunye nomlilo weenkuni.
Ngokwenene lo myezo uyonwabisa ngendlela obungayilindelanga. Inkulu kwaye isekiwe kwaye ibineminyaka emininzi isenziwa. Kukho iheji, iindlela, kunye neendawo ezigangathiweyo ngendlela engakholelekiyo kunye neendawo ezininzi zokuhlala nje kwaye uzingenise zonke. Igadi iyatshintsha ngonaphakade ngenxa yamaxesha onyaka kwaye luhlobo lwegadi onqwenela ngenene ukuba ubulahlekile. umntwana!
Ukuba uyasiva isidingo sokuhamba uye edolophini, ukuhamba apho kuthe tyaba kwaye kuyahlaziya kwaye kungaphantsi kwekhilomitha..... Ewe ungasoloko uqhuba okanye ukhwele!
Kukho indawo yokupaka iimoto ezi-2 phantsi kwekhapoti egqunyiweyo. Igaraji iguqulwe yaba yindawo epholileyo kunye negumbi lemidlalo elizayo.
Ababuki zindwendwe bakho abekho kwisiza kodwa banokuqhagamshelwa ngefowuni, ngomyalezo okanye nge-imeyile.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-22182